Bisha Cas ee Turkiga oo in ka badan 3700 oo qoys maanta raashin ugu qeybisay Kismaayo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 21, 2013 5:37 b 0
Kismaayo, August 21, 2013 – Magaalada Kismaayo ayaa waxaa shalay soo gaaray Markab gargaar raashin ah u siday hay?ada Bisha Cas ee dalka Turkiga, raashinkaas oo loogu talo-galay dadka danyarta ah ee ku sugan magaalada xeebta ah ee Kismaayo.
Maamulka Jubbaland ayaa isla maanta deeqdaasi ka timid Turkiga, ?waxay u qaybiyeen dadka barakacayaasha ah ee ku sugan daafaha magaalada, Hay’ada bisha cas raashinka ay keentay wuxuu isugu jiraa Bur iyo Sonkor.
Raashinka oo gaarayey ilaa10.000 ?(Tobban kun) oo kiish ayaa shalay laga dejiyey magaalada Kismaayo ee xaruunta KMG ah ee Jubbaland, iyadoo isla maanta loo qeybiyey 3700 (Saddex kun iyo toddobo boqol) oo qoys. Kuwaas oo ka mid ah dadka soo barakacay.
Madaxa samafalka ee maamulka Jubbaland Macalin Xaashi Cabdiraxmaan oo waraysi siiyey Daljir,wuxuu sheegay in raashinkaas ay dowladda Turkiga ugu deeqday shacabka ku sugan Kismaayo, Macalin Xaashi wuxuu intaas ku daray in maamulka Jubbaland uu Turkiga uga mahad-celinayo deeqdaasi.
Macalin Xaashi Cabdiraxmaan waxaa waraysatay Aamina Ladan oo Daljir ka tirsan